Nosy be Hell Ville Natoka-monina ilay mpianatra avy any Chine
Nisy tovolahy mpianatra Malagasy avy any Chine tonga tamin’ny zotram-piaramanidina ET 837 an’ny Ethiopian Airlines ny sabotsy lasa teo.
Nahiboka sy natoka-monina avy hatrany ao amin’ny hopitalin’i Nosy be ity zazalahy ity. Fepetra tsy maintsy noraisina izany, hoy ny tompon’andraikitra na dia tsy misy fambara na soritr’aretin’ny Coronavirus aza izy. Efa nisy ny fizahana nataon’ny mpitsabo tany an-toerana ka tsy misy aloha ny ahiana araka ny fanazavana voaray. Ny zoma 7 febroary no fantatra fa nandao an’i Chine ity mpianatra ity ka nankany Bangkok, Thailande. Avy ao indray izy no nandray fiaramanidina ka nihazo an’i Addis Abeba Ethiopia. Teo izy no niondrana tamin’ny fiaramanidin’ny Ethiopian Airlines ka izao tonga ao Nosy be izao. Efa izy tonga vao gaga ny rehetra. Fa tsy fantatry ny masoivohon’i Madagasikara any Chine mihitsy ve izany ny fandehanan’ity teratany Malagasy ity ? Hita amin’io diany io anefa fa efa mipetrapetraka ny paikady nampiasainy, tsy maintsy nanao famandrihan-toerana tamin’ny fiaramadinina roa karazana izy izany, izay vao niainga. Azo ambara fa mbola goragora ilay fepetra noraisina matoa misy olona avy any Chine tafiditra eto Madagasikara. Ity tovolahy ity aloha izao no hita, fa tsy fantatra izay mety efa nitranga na mbola hitranga, midadasika rahateo ny sisin-tanin’i Madagasikara ary mbola misy ny zotram-piaramanidina vahiny mivezivezy eto Madagasikara tsy mametraka olana ny amin’ny fitaterana olona avy any Chine.